Wararkii Ugu Danbeeyay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee saake kadhacay Magaalada Galkacyo
Tuesday, 12 February 2013 07:21
Khasaaraha ka dhashay qaraxaasi ayaa waxaa la sheegay inay gaarayaan dhaawaca ilaa 13-ruux oo 8-kamid ah ay yihiin ilaalada taliyaha halka sidoo kale 5-kale ay yihiin dad shacab ah.
Taliye ku xigeenka ciidanka Booliiska Maamulka Puntland ee qaraxa lala eegtay Nuuradiin Axmed Muuse oo warbaahinta kula hadlay Isbitaalka Magaalada ayaa sheegay in xaaladiisa caafimaad ay tahay mid wanaagsan dhaawac fududna uu soo gaaray.
Read more... Furitaankii Shir-weynihii Beesh Aadan Axmed Garaad Iyo Alle-barigii weynaa
Tuesday, 12 February 2013 06:56
Waxaan halkan idiinku soo gudbineynaa barnaamij dhameystiran oo ku saabsan shirka beesha Aadan Axmed Garaad ka furmay maalinimadii 11,2,2013.Barnaamijkana Taariikhiga Ah Ayaa Waxaad kaga Bogon Doontaan Dhamaan Qudbadiihii Maanta Laga Jeediyey Munaasibadasi.
Hadaba Hoos Ka Daawo Muuqaalka Shirweynihii Beesha Aadan Axmed Ee”Midnimo1”Riix halkan>>> Shirweynihii beesha Aadan Axmed Garaad oo maanta si rasmi ah uga furmey gudaha magaalada Buuhoodle,
Monday, 11 February 2013 16:43
Shirweynahani oo watey Ala-barigiisii ayna iskugu yimaadeen Cuqaal,Waxgarad,Siyaasiyiin,Culimaa’udiin,Qaar ka mida isimada dhulbahante”Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Iyo Garaad Cabdillaahi Garaad Soofe” Madaxda maamulka Khaatumo State iyo Ganacsato,Masuuliyiin iyo dhamaanba bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gudaha magaalada Buuhoodle.
Last Updated (Monday, 11 February 2013 17:38)
Read more... Shaqada ma awoodi karo waxaa yidhi Baadarigii ugu weynaa baaderiyada Roman katoliga
Monday, 11 February 2013 13:16
Baaderigii baaderiyada ugu weynaa oo iska dhiibay cilkii sababna uga dhigay ma awoodikari wax intaa ka badan. Benedictus XVI ayaa xilka ka tegaya 28 februari 2013
Read more... Dhibane Kornel Cabdinaasir Sayid Ex-Xeer Ilaaliyihii Maxkamada Ciidanka Qalabka Sida Dalka Oo Ku Dhibaataysan Kenya Iyo Dowladda Soomaaliya oo Aan Wax Daryeel Ah u Fidin
Xeer Ilaaliyihii Hore Maxkamada Ciidanka Qalabka Sida Dalka Soomaaliya Kornayl Cabdinaasir Axmed ( Sayid Taagwaa) Oo in mudo ah xaalad caafimaad u joogey Dalka Kenya ayaa Mudo Saddex Sanno ah wuxuu ku Dhibanyahay Dalka Kenya.
Read more... SNM oo sheegtay in aysan ka qayb galayn Shirka London+Vidoe
Monday, 11 February 2013 08:50
Gudomiyaha Xisbiga Cadaalada iyo Sinaanta ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe ayaa waxaa uu shegay in SNM aysan ka qayb galayn shirka may lagu wado in uu ka dhaco Magaalada London.
Read more... Nigeria Oo Soo Afjartay Abaartii Koob La`aanta , 19-Sano Ka Dib Koobka Qaramads Africa Ayay Qaadeen
Monday, 11 February 2013 08:45
Qaranka Nigeria ayaa markii sedexaad taariikhdiisa ku guuleystay koobka qaramada africa ee ka socday dalka South africa iyaga oo si sahal ah uga qaaday qaranka Burkina Faso oo markii ugu horeeysay taariikhda yimid finalka , waxa ayna ku dhamatay hal gool oo nadiif ah . Read more... Xulalka Burkina Faso iyo Nigeria oo isugu soo haray Finalka Koobka Afrika maanta oo axad ah ku kulmaya fiinaalka koobka Afrika
Ciyaartooyda Wadanka Burkina Faso ayaa ka saaray koobka Qaramada Afrika mid kamid ah dalalka ugu awoodda badan qaaradda Afrika ee Ghana kadib markii ciyaartii seme finalaha ama rubuc dhamaadka ay rigoorayaal 3-2 kaga badiyeen iyadoo 120-kii daqiiqo oo ay ciyaareen isla dhaafi waayay 1-1.
Xulka wadanka Nigeria ayaa waxaa isna uu 4-1 ugu soo adkaatay ciyaar ka tirsanayn Seme finalaha ama rubuc dhamaadka koobka xulalka qaaradda Afrika xulka Mali.
Dalalka Nigeria iyo Burkina Faso ayaa Axadda soo aadan ay ku kulmi doonaan Finalka koobka qaramada Qaaradda Afrika oo ay marti galinayso dalka Koofur Afrika waxana finalka lagu qabanayaa magaalada Johannesburg.
Read more... Garsoorihii Hayay Kulankii Burkino Faso Iyo Ghana Oo Shaqada Laga Joojiyay
Saturday, 09 February 2013 12:01
Xariirka kubada cagta qaarada Africa ee CAF ayaa shaaca ka qaaday in shaqadii laga joojiyay garsooraha reer Tunisa Slim Jdidi ee hayay kulankii Burkino Faso iyo Ghana sababo la xariira in shaqadiisa garsoornimo ay si weyn u liidatay .
Garsoorahaan reer Tunisa Slim Jdidi ayaa si weyn loogu eedeeyay in uu sameeyay qaladaad waa weyn kulankaas Semi-finalka ahaa taasina ay keentay in go`aankaan adag laga qaato.
Read more... Banaan bax ka dhan Ah Faroole oo & Maglada Bosaaso (Top Sawiro)
Saturday, 09 February 2013 11:47
Waxaa maanta ka socda magaalada Boosaaso mudaaharaad ballaaran oo ay ka qaybqaateen Bulshada magaalada , mudaaraadayaasha ayaa wata boorar ay soo daabacdeen oo ay ku sawiran yihiin sawiro looga soo horjeedo Cabdirxmaan Faroole, waxaana ku qornaa No Faroole,, Faroole Doni Mayno, waxaana ay ku dhawaaqayaan halkudhigyo looga soo horjeedo Maamulka Garoowe ee uu hogaamiyo Faroole.
Read more... Maamulka G/Banaadir oo sheegay in uu meel wanaagsan marayo u..
Saturday, 09 February 2013 11:38
Maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaca ka qaaday in dhammaanba degmooyinka gobolka uu ka jiro diyaar garoow xoog leh oo ay maamullada iyo shacabkaba ugu diyaar garoobeen ololaha todobaadka nadaafadda iyo bilic soo celinta Caasimadda kaasi oo uu horey ugu dhawaaqay Ra’isulwasaaraha Dalka.
Last Updated (Saturday, 09 February 2013 11:53)
Read more... Xaaladda Magaalada Baydhabo oo kacsan
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Baydhabo ee xarunta u ah Gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in xaaladda magaaladaas ay aad u kacsan tahay kaddib markii ay la weeraray hotel uu magaalada Baydhabo ka deganaa guddoomiyaha cusub ee ay dowladda Soomaaliya u magacawday Gobolka Bay.
Read more... Dr Xabeeb hospital dhimarka Buuhoodle oo la dhagaxdhigay
Waxaa shalay oo taariikhdu aheyd 07.02-13 si rasmiya loo dhagax dhigey hospitalka dadka waalan ee magaalada Buuhoodle oo ay dhagax dhigeenUrurka( Ileys Relief Organisation) ee marka magaciisa lasoo gaabiyana layidhaahdo IRO,waxaana dhagax dhigan kasoo qayb qaatey ismada gobolka,cuqaasha iyo culimada.
Waxaana dhagax dhigay hospitalka waalida ee Xabeeb Hospital,Garaad C/laahi Garaad Soofe iyo Suldaan Siciid Cismaan Cali oo ah ismada gobolka Cayn ,yadoo ay ka hadleen dhamaan bulshadani kala duwan sidii looga qayb qaadan lahaa dhismaha hospitalka waalida ee Xabeeb hospital,.
Read more... Gabadh waratay afsoomaaliya oo ka ganacsata hidaha iyo dhacanka Soomaaliya dhagayso
Af- Soomaliga waan kaa badiyaa sidaa waxaa yidhi gabadh af soomaliga baratey hadana wax ku qorta.
Markan bal nala daawo adigaaba yabi doona sida afsomaliga loo barto.
Halkan hoose riix oo daawoLast Updated (Friday, 08 February 2013 11:42) Olole Nadaafadeed oo Horufadhi laga Bilaabay Daawo Sawirrada
Friday, 08 February 2013 10:21
Iyada oo uudhawaan madaxweynaha maamulka khaatumo iyo qaarkamida golahiisa wasiirada ay gaadheen magaalada horufadhi oo ilaadii 45 km ujirta magaalada buuhoodle ee xarunta G/cayn
Read more... Daawo: Maxad kala Socotaa Xafladi Qaahira Iyo Madaxwayne (Xasan)
Friday, 08 February 2013 10:13
Waxaa xaflad aad iyo aad u Qurux Badan laguna soo dhaweynayo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud iyo wafdigiisa oo beryahan ku sugnaa magaalada Qaahira ee Dalka Masar ka Dhacday Hoolka way nee Jaamacadda al Azhar ee Magaalada Qaahira
Al Shabaab oo sixoogan loogu soo dhaweeyey Burco iyo Hargeysa iyo shan sarkaal oo sare oo lagu arkay Xalay xaafad ku taal Hargeysa
Shirkii dalalka Islaamka OIC oo ka furmay magaalada Qaahira iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qeyb galaaya.
Booliska Caalamiga ah ee Interpol oo kabixinya 350-kun Euro Booliska Soomaaliyeed